जब मेयरले लगाइरहेको कोट नै खोलेर वृद्धको शरीर ढाकिदिए.....
शशिशेखर घिमिरे। समाजमा कोही राम्रा कामले चर्चा बटुल्छन् त कोही समाजसेवा गरेर। कोही कसैको वेदनामा सहयोग गरेर खुशी हुन्छन् त कोही अनेक काम गरेर खुशी हुन्छन्। तर शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यस्तो एउटा तस्वीरसहितको पोष्ट जसलाई हामीले प्रसंशाका केही शब्दले वाह! भनेर मात्र छोड्नै सकेनौं। त्यसैले त फेसबुक प्रयोगकर्ता राजाराम गौतमले शुक्रबार दिउँसो पोष्ट गरेको त्यही तस्वीर र उनको अभिव्यक्तिमा कलम चलायौं।
तस्वीरमा एक जना वृद्धलाई एक जना अर्धवैँशेले लुगा लगाइदिँदै छन्। अनि तस्वीरमा गौतमले केही शब्द लेखेका पनि छन्। ‘जब जाडोले काप्दै एक वृद्व आफ्नै मेयर खोज्दै कार्यकक्षमा प्रवेश गरे, तब लगाएको कोट खोलेर मेयरले नै पहिराइदिए, पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलले।’ उनले लेखेको यति नै हो।
हो, मेयरले त्यसो गरिरहँदा देख्नेले रमाइलो मात्र महसुस गरेनन् होला भन्नले वाह! कति उदार दिल भने होला। कतिले ताली पड्काए होला। वृद्धलाई आफैंले लगाइरहेको कोट फुकालेर लगाइदिएको तस्वीर पोष्ट गर्ने उनै गौतमलाई पनि माहोल कस्तो थियो भनेर सोध्न पटक–पटक उनको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरमा डायल गरे पनि सम्पर्क हुन सकेन। खयर जे जस्तो भए पनि यतिखेर काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलको कामलाई भने उनकै नगरपालिकाका कतिपयले मुक्तकण्ठले प्रसंशा पनि गरिरहेका होलान्। तर हामीले त्यही पोष्टमा दर्जनौं व्यक्तिले मेयरको कामलाई समर्थन गरेको भेट्यौं।
उक्त पोष्टमा सुशीला तामाङले प्रतिक्रिया दिँदै लेखिन्। ‘मानवता भन्दा ठूलो कुरा अरू केही हुनै सक्दैन । तर यसलाई राजनीतिको गन्धले छुनुहुन्न।’ त्यसैगरि भोला थापाले ‘गुड जव’ मेयर साप् भनेर लेखेका छन्। उक्त पोष्टमा नै केन्द्रित रहेर अन्य दर्जनौंले मेयरको प्रसंशा गरेका छन्।
झण्डै २ सय जनाले लाइक गरेर मेयरको कदमको सम्मान गरेका छन्। जे जस्तो भए पनि जाडोले थरथर काम्दै कार्यकक्षमै पुगेका वृद्धको शरीरलाई न्यानो दिन अग्रसर मेयरले अझै थुप्रै कामबाट धेरैको मन जितुन् यही कामना अनि चाहना।